February | 2009 | Zizawa's refuge
Literary movement in Burmese blogosphere
Posted by zizawa ⋅ 27/02/2009 ⋅5Comments
ဘလော့စာပေလှုပ်ရှားမှု ဗမာတွေကြားက ဘလော့စာပေ လှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်ရတာ အားရစရာကြီးပါ။ ကိုယ်တိုင် တခါတလေ အားတဲ့အခါ စာလေးရေးလိုက်၊ သူများတွေရေးတာ လက်လှမ်းမီသလောက် လိုက်ဖတ်လိုက်နဲ့ ပျော်စရာကြီးပါ။ ကိုယ့်စာအခိုးခံရသူတွေအတွက်တော့ စိတ်ညစ်စရာလဲ ပါမှာပေါ့။ ဘလော့စာပေယဉ်ကျေးမှုထဲမှာ ဒီလိုပျော်ပျော်ကြီးကူးနေတုန်း ဘလော့ဂါတွေကို စုစည်းပံ့ပိုး ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ လိုနေမလားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဘလော့ဂါ society ရယ်လို့ ထောင်ထားတာကြားဖူးပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တချို့ ပြသနာဖြစ်ကြတာလဲ နားစွန်နားဖျား ကြားမိပါတယ်။ အခု ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာတော့ မလေ့လာမိပါဘူး။ အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ဘလော့ဂါတွေအကြား သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလဲ မစုံစမ်းကြည့်မိပါဘူး။
Bogyoke’s 94th birthday
Posted by zizawa ⋅ 08/02/2009 ⋅ 1 Comment
ဓာတ်ပုံမူပိုင်ခွင့်ကို ရှာမရသဖြင့် credit မပေးနိုင်သည်ကို တောင်းပန်ပါသည်။ လုပ်ကြံမခံရခင် ၆ရက်အလို ဇူလိုင် ၁၃ရက်နေ့က မြို့တော်ခန်းမမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသွားတဲ့ နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းထဲက တချို့အပိုဒ်တွေကို ၉၄နှစ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ “တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော် [ဖော်ဆောင်ရတာဟာ] အိမ်ဟောင်းကို တည်ရုံ အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ တခုလုံး ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက် အဲဒီပျက်သွားတဲ့ နေရာမှာ ထပ်ပြီး အိမ်အသစ်ဆောက်တာနဲ့ တူပါတယ်။ ………
Posted by zizawa ⋅ 03/02/2009 ⋅ 1 Comment
ပွဲကြီးပွဲကောင်းလွတ်သွားတဲ့ မနုသွဲ့ ကြည့်ဖို့deserted park snowman waiting for his friend… hope she turns up soon. otherwise,……. frozen beauty… abandoned (by the council) town… leave the gate ajar, will … Continue reading →